Jirama: Fahatapahan-drano teny Mahalavolona
lundi, 05 novembre 2018 22:15
Noraisin’ny JIRAMA ireo solotenan’ny mponina.
Nitondra ny fitarainan’izy ireo teny amin’ny foiben’ny JIRAMA Ambohijatovo Ambony ireo solotenan’ny mponina eny Mahalavolona Andoharanofotsy, androany. Izany dia noho ny fahatapatapahan’ny rano teny an-toerana nanomboka ny alin’ny 31 oktobra lasa teo, ary tapaka tanteraka mihitsy izany tamin’ny ampahan’ity toerana ity tao anatin’ny hateloana.
Nohazavaina tamin'izy ireo ny olana misy amin'ny famatsiana rano eto Antananarivo, anisan'izany ny tsy fahampiana, indrindra ao anatin'ny "étiage" isika izao sy ny fahanteran'ny fitaovana mitondra ny rano.
Etsy an-daniny nisy fahavakisana ny fantsona lehibe mpamatsy rano roa miainga amin’ny tombim-pamokarana ao Ankadivoribe, ka ny zoma 2 novambra alina vao hita, ny iray tao anaty alan’Iavoloha ary ny iray kosa nanodidina ny reniranon’i Sisaony.
Efa namerina tsikelikely ny famatsiana ny JIRAMA nanomboka ny asabotsy hariva fa ny fiverenan'ny fitsinjarana araka ny tokony ho izy no mbola nisy fotoana naharitra kely.
Tao aorian’ny fihaonana androany maraina dia nidina teny an-toerana ny ekipan'ny JIRAMA notarihin'ny tale teknika ny rano teto Antananarivo, ary nijery izay azo natao hamerenana haingana ny famatsiana.
Nanomboka tamin'ny 5 ora hariva teo dia niverina tsikelikely ny rano tamin'ireo pompes publics sasany, ary tamin'ny 7 ora sy sasany dia ny akamaroan'ny faritra no efa nandeha ny rano na dia mbola somary ambanimbany aza ny pression.
Miantso hatrany ny rehetra ny JIRAMA hampita ny vaovao mitranga, indrindra ny sefo fokontany ahafahana mamaha haingana ny olana.